ရွှေ၊ ငွေ၊ ရွှေဖြူတို့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည် ဘာကြောင့်ကောင်းမွန်သောစိတ်ကူးဖြစ်ရသနည်း
အဖိုးတန်သတ္တုများတွင် အောင်မြင်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး
ရှေးခေတ်ထဲကပင် ရွှေ၊ ရွှေဖြူနှင့် ငွေကဲ့သို့ အဖိုးတန်သတ္တုများသည် လူအများအတွက် အထူးသဖြင့် မသေချာသောကာလများအတွင်း၊ ငွေကြေးတည်ငြိမ်မှုအရင်းမြစ်အဖြစ် ကျန်ရှိနေသည်။ စစ်ပွဲများ စတင်သည်၊ ပြီးဆုံးသည်၊ ရာစုနှစ်များပြောင်းလာသည်၊ သတ္တုများကတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အကောင်းဆုံး ခိုမှီရာပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ် ကျန်ရစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကြားတွင် ယင်းတို့ကိုဘာလို့မှတ်မိလွယ်ကြတာလဲ? ရှာကြည့်ရအောင်။
ရွှေတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စီစဉ်ပါက၊ သင်သည် ရွှေတုံးတွေ ဝယ်ရန်(သို့) ရောင်းရန်မတွေးပါနဲ့။ ဒီ့အစား ရွှေ၏ ငွေသားဈေးနှုန်းနှင့်သာ ပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းအား အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းရင်းများ၏ ထိန်းချုပ်ခြင်းခံရပြီး၊ ဈေးကွက်ကိုဖြတ်ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲကို ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ရွှေကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဗျူဟာအတွက် ဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတာကို ရှာကြည့်ရအောင်။
"အဝါရောင်သတ္တု"သည် ငွေကြေးဈေးကွက်တွင် အချိန်အတော်ကြာပါဝင်ပါသည်။ ယခင်ခေတ်ကာလမှာတော့၊ ၎င်းကို fiat ငွေကြေးများကို ထောက်ပံ့ရန်တောင်မှ သုံးခဲ့ပါသေးသည်။ ရွှေစံနှုန်းကာလအတွင်း ငွေစက္ကူသည် ယင်းတို့၏အရံအနေဖြင့် ရွှေနှင့်တူညီသော ပမာဏအားဖြင့် ထောက်ပံ့ခံခဲ့ရသည်။
၁၉၈၀-ခုနှစ်များမှ ၂၀၀၀ခုနှစ်များအထိ၊ မြင့်တက်လာသော စတော့ရှယ်ယာများနှင့် ခိုင်မာပြီး၊ တည်ငြိမ်သည့် စီးပွားရေးတိုးတက်လာမှုကြောင့် အဖိုးတန်သတ္တုကို စိတ်ဝင်စားမှုသည်အလွန်နိမ့်ပါးလာသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအချိန်ကာလအတွင်း ဈေးနှုန်းသည် ပျမ်းမျှ $၃၀၀ နှင့် $၅၀၀ကြားအတွင်းဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည်။ ရွှေတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအတွက် စိတ်ဝင်စားမှုသည် ၂၀၀၈ခုနှစ် ငွေကြေးပဋိပက္ခပြီးနောက် တိုးလာခဲ့သည်။ ဈေးနှုန်းသည် ၂၀၁၁ သြဂုတ်လတွင် $၁,၉၀၇ တောင်ရောက်ခဲ့သည်။ နာလန်ပြန်ထူလာသည့် အမေရိကန်စီးပွားရေးနှင့် ဗဟိုအစိုးရအတိုးနှုန်းမြင့်တက်လာမှုသည်လည်း ၂၀၁၃မှစပြီး ရွှေကိုဆုတ်ယုတ်စေခဲ့သော်လည်း၊ အဖိုးတန်သတ္တုများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ အာရုံကိုဆက်လက်ဆွဲဆောင်လျှက်ရှိသည်။
ဒါဆို ဘာလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာ ရွှေကိုရွေးကြတာလဲ?
- ၎င်းသည် မသေချာသော အချိန်ကာလများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဈေးကွက်အပါအဝင်၊ နိုင်ငံတော်နှင့်သက်ဆိုင်သောအကြွေးမြီအလွန်မြင့်မားခြင်း၊ ဆုတ်ယုတ်သော ငွေကြေး၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုမြင့်မားခြင်း၊ စစ်ပွဲနှင့် လူမှုရေးမတည်ငြိမ်မှုများအတွင်း တည်ငြိမ်လျှက်ကျန်ရစ်သည်;
- ရွှေစံနှုန်းမှတ်တမ်းသည် ရွှေပိုင်ဆိုင်မှုအား ကုန်စည်များထက် ပိုပြီးငွေကြေးဆန်စေသည်;
- ရွှေသည် ဈေးကစားခြင်း၏ အကြောင်းကိစ္စအဖြစ်ပြုမူသည်;
- ရွှေသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနှင့်ဆိုင်သည်: ၎င်းသည် ကြာရှည်ခံသည်၊ သယ်ရလွယ်ပြီး၊ ကျယ်ပြန့်စွာလက်ခံကြသည်။
ရွှေတန်ဖိုးကို လွှမ်းမိုးသည့် အကြောင်းရင်းများ
အခရာကျသည့် ငွေကြေးများနှင့်မတူဘဲ၊ ရွှေသည် အလုပ်အကိုင်၊ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် အခြေခံအဆောက်အုံတို့၏ အဆင့်များဖြင့် ထောက်ပံ့ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများရှိသည့်အတွက် ၎င်းအား ရေနံ (သို့) ပြောင်းကဲ့သို့ အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်၊ ရွှေဈေးသည် များသောအားဖြင့် ၎င်း၏ စက်မှုဇုန် ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအားများမှ သီးခြားဆောင်ရွက်လေ့ရှိသည်။ အောက်တွင် ရွှေဈေး၏ ဖြစ်ပျက်မှု အရေးကြီးဆုံးအချက်ကို ရှင်းပြထားပါသည်။
၁။ ဗဟိုဘဏ် အစိုးရ။ ဗဟိုဘဏ်များသည် အဝါရောင်သတ္တုကို အမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကိုင်ထားပါ။ ရွှေကို အရေးပေါ် ငွေဖြစ်လွယ်မှု (သို့) ငွေကြေးကြားဝင်ခြင်းကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထပ်လောင်းရသော်၊ ဗဟိုဘဏ်များသည် ရွှေကိုဝယ်ရန် (သို့) ရောင်းရန်ဆုံးဖြတ်သည့်အခါ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေကို အာရုံစိုက်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဗဟိုဘဏ်သည် ၎င်း၏ငွေကြေးထိန်းသိမ်းမှု ခွဲခြားရန်ဆုံးဖြတ်ပါက၊ ရွှေတန်ဖိုး မြင့်တက်သည်။
၂။ စွန့်စားမှုကိုမနှစ်သက်ခြင်း။ ရှယ်ယာဈေးကွက်ရှိ စိတ်ခံစားမှုသည်လည်း အဝါရောင်သတ္တု၏ ဈေးနှုန်းတွင် အရေးပါသောကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပါသည်။ စွန့်စားမှု-လျှော့ချသည့် ဒိုင်းနမစ်တိုးလာပါက၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် စတော့ရှယ်ယာများရောင်းချရန် ပိုနှစ်သက်ပြီး၊ လုံခြုံပြီးပိုတည်ငြိမ်သော ရွှေဘက်သို့လှည့်ကြပါသည်။
၃။ ဗဟိုဘဏ်များ၏ အတိုးနှုန်း။ ယင်းသည် ရွှေဈေးနှုန်းကို သက်ရောက်မှုရှိသည့် သမိုင်းဝင်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ တကယ့်အတိုးနှုန်းများကို နိမ့်သောအဆင့်တွင် သတ်မှတ်ပါက၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြားနည်းလမ်းများသည် နိမ့်သော (သို့) အနုတ်ပြသော အမြတ်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ရွှေဆီသို့တွန်းပို့ပေးပါသည်။ အတိုးနှုန်းများသည် မြင့်ပါက၊ ခိုမှီရာ ပိုင်ဆိုင်မှု၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆွဲဆောင်မှုများသည် ကျဆင်းလာသည်။
၄။ USD ဒိုင်းနမစ်။ ရွှေအား အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့် တန်ဖိုးဖြတ်သည့်အလျှောက်၊ ကြီးမားတဲ့ပြောင်းပြန် ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ယင်းတို့သည် ဆန့်ကျင်ဘက်လားရာကို ရွေ့လျှားကြသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှ ဒေါ်လာကို ဈေးကွက်သို့ရောင်းချပါက၊ ရွှေသည် ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလာပြီး၊ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ပိုဈေးကြီးလာသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ အားကောင်းလာပါက၊ ရွှေဈေးကျလာသည်။ သို့သော် ထိုကဲ့သို့ အခြေအနေအားလုံးတွင် ဖြစ်ပျက်နေသည်မဟုတ်ဘဲ၊ ပဋိပက္ခနှင့် စီးပွားရေးရှိ ကြီးမားသည့်မသေချာမှုကာလများအတွင်းသာ အများဆုံးဖြစ်လေ့ရှိကြောင်း သင်သိသင့်ပါသည်။
၅။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု။ စားသုံးသူဈေးနှုန်း အညွှန်းကိန်းသည် ရွှေဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နေသည်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု မြင့်လာပါက၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ပိုပြီး "မာကြော" ပြီး စိတ်ချရသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရှာဖွေတတ်ကြပြီး၊ ရွှေတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ရွေးကြပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်၊ စီးပွားရေးအခြေအနေများ ကောင်းပါက၊ ရွှေဝယ်လိုအား ကျဆင်းပြီး၊ ပိုင်ဆိုင်မှုသည် ဈေးပိုပေါလာသည်။
၆။ ရွှေထုတ်သည့် နိုင်ငံများ။ ရွှေထုတ်သည့်နိုင်ငံများတွင် နိုင်ငံရေး မသေချာမရေရာမှုများ၊ ယင်းတို့တွင် အသုံးချသည့် ပိတ်ဆို့မှုများသည် ရွှေထုတ်လုပ်မှုအဆင့်များကို သက်ရောက်နိုင်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းဈေးနှုန်းကို တက်စေသည်။ သို့သော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံ ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် လူသိများသည့် တရားဝင်အထောက်အထားမရှိသည့်အလျှောက်၊ ဤအကြောင်းရင်းသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အနည်းဆုံးသိကောင်းစရာဖြစ်သည်။
ငွေသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကြားတွင် ဒုတိယလူကြိုက်များသော သတ္တုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အဝါရောင်ညီကို (ရွှေ)ကဲ့သို့ပင်၊ ၎င်းအား ငွေကြေးတစ်ခုအဖြစ် အချိန်အတော်ကြာ သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ဥပမာ၊ ဗြိတိန်ပေါင်အား ငွေ၏ ပေါင်နှင့်တူသောကြောင့် ပေါင်ဟုခေါ်ခဲ့ကြသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှု၏ တန်ဖိုးကို သက်ရောက်မှုရှိသည့် အကြောင်းရင်းအများစုမှာ ရွှေနှင့်ဆိုင်သည့်အရာများနှင့် ဆင်တူပါသည်၊ သို့သော်၊ ဈေးလှုတ်ခတ်မှုတွင် အနည်းငယ်ကွာခြားမှုရှိသည်။ ဈေးနှုန်းရွေ့လျားအား(dynamic)များသည် ဆင်တူကြသော်လည်း၊ ငွေသည် ရွှေထက် လှုတ်ခတ်မှုနည်းပါသည်။
ရွှေဖြူသည် ငွေကြေးရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးပြုသည့် အရှားပါးဆုံးသတ္တုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဈေးနှုန်းသည် အများအားဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဝယ်လိုအားနှင့် သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းခံရသည်။ ထုတ်လုပ်မှုအား ရွှေထုတ်လုပ်မှုထက် ပိုနည်းသောနိုင်ငံများတွင်သာ ဇောက်ချလုပ်ကိုင်သည့်အတွက်၊ ရွှေဖြူဈေးကွက်လှုပ်ခတ်မှုသည် အခြားသော သတ္တုဈေးကွက်များထက် ပိုမြင့်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် အခြားသတ္တုများထက် ကမ္ဘာ့ရေးရာမသေချာမှုများ၏ အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းပိုခံရလေ့ရှိသည်။
အချုပ်ဆိုရသော်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် သတ္တု(ရတနာ)များအား မတည်ငြိမ်သည့်ကာလများအတွင်း လုံခြုံသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများအဖြစ် ရွေးချယ်ကြသည်။ သူတို့သည် ပိုတည်ငြိမ်သော အကျိုးအမြတ်ရစေနိုင်ပြီး၊ ဈေးကွက်ရှိအပြောင်းအလဲများကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုနည်းသည်။